पृथ्वीनारायण शाहलाई नेपाली चश्माले हेरौँ - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
पृथ्वीनारायण शाहलाई नेपाली चश्माले हेरौँ
मेरो लाइफस्टाइल	|| 11 January, 2022
नेपाली सेनाले राष्ट्र एकीकरणका सन्दर्भमा प्रयोग भएको मार्गमा केही वर्षदेखि पृथ्वीजयन्तीका अवसरमा गोरखाबाट काठमाडौंसम्म ‘एकीकरण पदयात्रा’ गर्दै आएको छ । सेनाले यसपटक पनि उक्त एकीकरण पदयात्रालाई निरन्तरता दियो ।
सेना, स्थानी जनता र विद्यार्थी सामेल पदयात्रा पुस २० मा गोरखाबाट शुरू भई धादिङ, नुवाकोट र नागार्जुन हुँदै आज अर्थात् पुस २७ मा हनुमानढोका आइपुग्यो । यसको सन्देश प्रष्ट छ, नेपाली सेना पृथ्वीनारायण शाहलाई ‘नेपाल एकीकरणको नायक’ मान्छ । राष्ट्रनिर्माताको रूपमा स्वीकार गर्छ ।
किनकि, नेपाल एकीकरण अभियानका शुरुवातकर्ता शाहले जुन सेनालाई साथ लिएर युद्ध लडेका थिए, त्यसैको स्वरूप हो– ‘नेपाली सेना’ । नेपालको मात्र होइन, विभिन्न राज्यमा छरिएर रहेका सेनाहरूको पनि एकीकरण भयो र बन्यो नेपाली सेना । यसैले नेपाली सेनाले शाहलाई सम्झिरहनु आफैंमा अस्वाभाविक भएन ।
पृथ्वीनारायणलाई हेर्ने दृष्टिकोण नेपाली समाजमा फरक–फरक छ । एकथरी, उनलाई राष्ट्रनिर्माता मान्छन् भने अर्कोथरी सामन्तवादी राजाको उपमा दिन्छन् ।
तर, पृथ्वीनारायणलाई हेर्ने दृष्टिकोण नेपाली समाजमा फरक–फरक छ । एकथरी, उनलाई राष्ट्रनिर्माता मान्छन् भने अर्कोथरी सामन्तवादी राजाको उपमा दिन्छन् । उनीहरूको तर्क छ, शाहले हस्तक्षेपपूर्ण तरिकाले गोरखा राज्य विस्तार गरेर विविधतामा रहेका नेपालीलाई एकल भाषा र संस्कृति अवलम्बन गर्न बाध्य बनाए । फरक सभ्यताका बीचमा आदिम सभ्यता लादेको भनेर शाहको आलोचना पनि हुने गरेको छ ।
शाहको जन्मदिन पुस २७ लाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा घोषणा गर्नुका साथै उक्त दिन सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने माग एकथरीको छ । तर, अर्कोथरी यस्तो मागको विरुद्घमा देखिन्छन् । राष्ट्रवादका नाममा फेरि उही गोर्खाली पहाडिया हिन्दू उच्च जातीय ब्राह्मणवादी अहंकारको एकल जातीय वर्चस्व कायम राख्ने उद्देश्य निहित रहेको उनीहरूको तर्क छ ।
त्यसो भए शाह नेपाल राष्ट्रका लागि नायक हुन कि खलनायक ?
यसका लागि पहिले शाहले के गरे भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
– भौगोलिक, शासकीय र राष्ट्रिय एकता गरे । विभिन्न राज्य–रजौटा, भुरे–टाकुरेलाई कतै मनाएर कतै लडेर नेपाल राष्ट्र स्थापना गरे ।
यदि, टुक्रा–टुक्रामा विभाजित राज्यहरूलाई एकीकृत राष्ट्रमा परिणत गरेर नेपाल राष्ट्र बनाउन शाहको प्रमुख योगदान थियो भने उनलाई नेपालको नायक भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? शाह नायक वा खलनायक के हुन् ?
– कुनै थिति नै नबनेको एकीकृत नेपालमा थिति बसाउन प्रारम्भ गरे ।
– ‘आफ्नो साम्राज्यमा कहिल्यै घाम नअस्ताउने’ दाबी गर्ने तत्कालीन महाशक्ति ब्रिटिस इन्डियाको आक्रमणबाट नेपाललाई जोगाएर नेपालको सिमाना विस्तार गरे ।
अब प्रश्न उठ्छ, यी सब काम गर्नु शाहको गल्ती थियो ? यदि थिएन भने उनलाई खलनायक भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यदि, टुक्रा–टुक्रामा विभाजित राज्यहरूलाई एकीकृत राष्ट्रमा परिणत गरेर नेपाल राष्ट्र बनाउन शाहको प्रमुख योगदान थियो भने उनलाई नेपालको नायक भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? शाह नायक वा खलनायक के हुन् ? बहस हुन सक्छ । तर, यही बहसलाई लिएर समाज विभाजित हुन आवश्यक छैन ।
शाहलाई पश्चिमा त्यसमा पनि विशेष गरेर ब्रिटेनले एकरत्ति पनि मन नपराउनुको कारण छ । त्यो हो, शाहले ब्रिटिस इन्डियाको सेनालाई पराजित गर्नु । उनले नेपालमा धर्म परिवर्तन गराउने अभियानलाई शुरुमै लगाम लगाइदिए । पश्चिमाहरूलाई नेपालमा हावी हुनै दिएनन् । कतै हामीले शाहको विरोध गर्दा नजानिदो ढंगले उनीहरूलाई नै खुसी बनाउने काम त गरिरहेका छैनौं ?
शाहको शालिक फोड्नेदेखि लिएर शालिकमा थुक्नेसम्मका गतिविधिमा मलजल गर्दै जाने हो भने त्यसले कस्तो परिणाम ल्याउला भन्ने अनुमान हामीले सहजै गर्न सक्छौं ।
विभिन्न तर्कहरू दिएर नेपाली समाजलाई विभाजित गर्ने प्रयास हिजो पनि भएका थिए, आज पनि हुँदैछ र भोलि पनि हुनेछ । विभाजित गर्ने तत्वले केही न केही आधारको सहयोग लिन खोज्छ नै । प्रष्ट छ, त्यसकै एउटा कडी हुन् शाह । शाहको शालिक फोड्नेदेखि लिएर शालिकमा थुक्नेसम्मका गतिविधिमा मलजल गर्दै जाने हो भने त्यसले कस्तो परिणाम ल्याउला भन्ने अनुमान हामीले सहजै गर्न सक्छौं ।
कुनै पनि राष्ट्र त्यतिबेला सुखी र खुसी हुन्छ जतिबेला नागरिक एक–आपसमा विभाजित होइन, एकीकृत हुन्छन् । आफ्नो जीवनशैलीमा घृणालाई होइन सद्भावलाई मात्र स्थान दिने नागरिकले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हो ।
पृथ्वीनारायणले गोरखा राज्य विस्तार गरे कि नेपाल एकीकरण ?
प्रचण्डले भने–राप्रपा र हाम्रो गोत्र मिल्छ